सागको स्वर्ण जित्नै खेलेकी हुँ : सिना मादेन - कभर गर्ल - नारी
धरान निवासी कोच नवीन मादेन लिम्बूको सपना बलिउड चलचित्र दंगलका अमिर खानसँग ठ्याक्कै मिल्थ्यो । दंगलमा छोरीहरूका बुवा अमिरलाई छोरीहरूलाई कुस्तीमा स्टार बनाउने चाहना थियो भने नवीनलाई तीन छोरीलाई तेक्वान्दोमा । लाहुरे बस्ती धरानमा जन्मिएका नवीनका छोरीहरूलाई बुवाको तेक्वान्दो खेलमा भन्दा नाच्ने, गाउने, राम्री हुने चाहना थियो । दुई दिदी तेक्वान्दो खेल्दा सिना सानै थिइन् ।
तर बुवाबाट आउने प्रशिक्षणको दबाब भने उनलाई पनि उस्तै हुन्थ्यो । बुवासँग तीनै जना छोरीहरू डराउँथे । घरमा सबैका लागि अनुशासनको घेरा थियो । बिहान बहाना गरी ढिला उठ्ने, अटेरी हुँदा धेरै पटक सजायँ खाने उनको दिनचर्या नै थियो । सानोमा उनलाई मैले कस्तो बुवा पाएँछु, अरूका बुवाहरूले छोरीहरूलाई पुलपुलाएको देख्दा आफूलाई दु:ख लाग्ने बताइन् । स्कुलमा नाच्न च्याम्पियन सिनालाई घरमा भने धेरै नाच्ने समय थिएन ।
खेलबाहेक अरू के–केमा रुचि छ ?
पहिले नृत्यमा रुचि थियो तर अब तेक्वान्दो नै हो ।
सागका लागि तयारी कस्तो थियो ?
साग हुनुअघि मलेसिया, इन्डोनेसियामा लगेर त्यहाँका राष्ट्रिय टिमसँग प्रशिक्षण गराइएको थियो । कोचहरूले पनि धेरै मेहनत गरी सिकाउनुभयो ।
सागमा दुईवटा उपलब्धि पाउनुभयो, अबको तयारी केमा हुनेछ ?
अब एसियन गेम आउँदैछ । त्यसमा फोकस भएर लाग्ने सोच छ ।
भनिन्छ जितले घमण्ड आउँछ ? आफूमा कत्तिको लागू भएको छ ?
हार्नु जितको लक्ष्यमा पुग्ने अवसर हो जस्तो लाग्छ, तर जितमा मात्यो र घमण्ड आयो भने उसको अन्त्य पनि सुरु हुन्छ । ममा एक थोपा पनि घमण्ड आएको छैन । म खेल्नुअघि जस्तो सिना मादेन लिम्बू थिएँ, अहिले पनि उस्तै छु ।
तपाईंको लुक्स र फिगर आकर्षक छ, मोडलिङ र चलचित्रतिर कत्तिको रुचि छ ?
खेलसँग सम्बन्धित चलचित्र वा मोडलिङमा अफर आयो भने सोच्नुपर्ला ।
कस्ता चलचित्र हेर्नुहुन्छ ?
लभ स्टोरी चलचित्रहरू मात्र हेर्छु । युट्युबमा कोरियन ड्रामाहरू बढी हेर्छु ।
कत्तिको स्टाइलिस्ट भएजस्तो लाग्छ ?
मलाई राम्री देखिन मनपर्छ । कोरियन स्टाइलका ड्रेसअपहरू गर्न मनपर्छ । मसँग यस्ता ड्रेसहरू पनि धेरै छन् ।
मनपर्ने कलर ?
मनपर्ने खाना ?
पुलाउ, चाउमिन, म:म ।
मेकअपमा कत्तिको रुचि छ ?
मलाई चिटिक्क भएर बस्न मन लाग्छ । त्यसैले मेकअप आफै सिकेकी छु । मसँग मेकअप किट्सको कलेक्सन पनि राम्रै छ ।
यसरी मेकअप गर्दा बुवाले केही भन्नुहुन्न ?
बुवालाई राम्रो खेले पुग्छ, लुगा, मेकअपमा नो कमेन्ट ।
जाडो मौसम कत्तिको मनपर्छ ?
एकदमै मनपर्छ । जाडोमा काम गर्ने जोस बढ्छ र फ्रेस पनि हुन्छु ।